DARYEELKA STRAWBERRY INTA LAGU GUDA JIRO UBAX (WARAABINTA, BACRIMINTA, POLLINATION) - STRAWBERRIES
Qof kastaa wuu ogyahay casaan, casaan, casiir leh oo la yidhaahdo strawberries. Si aad u hesho goosashada fiican ee buuxda, waxay u baahan tahay inay bixiso daryeel tayo leh maaha oo keliya inta lagu jiro xilli firfircoon, laakiin sidoo kale inta lagu jiro ubax. Daryeelka Strawberry Waxay ka kooban tahay waraabinta habboon, quudinta, nadiifinta haramaha, boodhka xad-dhaafka ah, iyo tilling ciidda agagaarka duurka.
Ma taqaanaa? Miisaanka strawberry ee adduunka ugu weyn wuxuu ahaa 231 garaam.
Noocyada quudinta strawberries inta lagu jiro ubax, sida loo bacrimiyo berry macaan
Bannaanka u badan yihiin ra'yiga ah in inta lagu jiro muddada gawsaha strawberries uma baahnid bacrin ah, laakiin tani ma aha sidaas. Kuurku wuxuu ku dhawaad ​​dhammaan xooggeeda muhiimka ah ee ku saabsan abuurista inflorescences iyo Bisaylkiisa ee berry. Hoos waxaa ku qoran in la tixgelin doono quudinta quutulaha inta lagu jiro ubax, Bacriminta waxaa lagu dabaqi karaa oo kaliya marka la beeray oo ay duurka horey u daaqeen. Cagaarshowgu wuxuu u baahan yahay in la quudiyo saddex goor sannadkiiba: bilowga xilli sii kordhaya ee baadiyaha, inta lagu jiro ubax iyo dhamaadka fruiting. Waxa ugu muhiimsan ee strawberries waa bacriminta ee duurka inta lagu jiro ubax iyo formation of berry. Si aad u quudiso strawberries inta lagu jiro ubax waxay noqon kartaa waxa lagula talinayaa inuu bannaanka u taliyo: Bacriminta macdanta adag. Wixii bacriminta si ay u galaan ciidda iyo si ay u nuugaan xididada strawberry, ciidda ku wareegsan duurka waa in la dabciyo.
Waa muhiim! Bacriminta macdanta inta lagu guda jiro guntinta of strawberries waxaa lagu dhaqmaa mar.
Cawshiyaadka caadiga ah ma isticmaalaan strawberries inta lagu jiro ubax. Inta lagu jiro dhismaha duurka ugxan leh waxay u baahan yihiin potassium tiro badan. Si loo daboolo baahida loo qabo potassium, codso faleebo digaag, dooxada + ash ama amooniyamta potassium. Marka burooyinku ay bilaabaan inay muuqdaan, shaaha oo ah macmiil ah ayaa lagu qasi karaa toban litir oo biyo ah oo waraabiyo baadiyaha. Isticmaalka sicirka ka yar baadiyaha qiyaastii 0.5 litir. Marka duufaanku u muuqdo, strawberries ayaa lagu shubay xal of digaag ama dooxada dusheeda leh ash oo halkii litir ah nus litir oo biyo ah.
Nafaqada Foliar ee strawberries leh boric acid inta lagu jiro ubax ku kordhinaysaa koritaanka ubaxyada, taas oo iyana waxay saameeysaa tirada dhalidda. Wixii buufinta duurka, 1 g of boric acid waxaa lagu qasi karaa toban litir oo biyo ah. Sidoo kale ku buufinta kharashka 0.02% sukphate zinc. Mashiinka noocan ah ma aha oo kaliya ciriiriga cagaarsho leh, laakiin sidoo kale wuxuu keenaa abuuritaanka ugxan iyo kordhinta dhalidda ilaa soddon boqolkiiba.
Dharka xawaashka loogu talagalay strawberries ayaa loo yaqaan in aan waqti dheer ka hor, laakiin ay u suurtagashay in ay helaan caan ka mid ah inuu bannaanka u. Dhirta quudinta oo khamiir leh laba goor xilli. Hal kiilo oo khamiir ah ayaa lagu kala diraa shan litir oo biyo ah waxaana loo oggol yahay inay soo dhajiso laba saacadood. Laga soo bilaabo xalkan, weel nus litir ah ayaa la qaadaa waxaana lagu qasi karaa toban litir oo biyo ah. Ugu yaraan 0,5 litir oo bacriminta la dhammeeyey ayaa lagu shubay barkad kasta. Saameynta isticmaalka khamiirka ee beerta ayaa kugu yaabi doona.
Iyadoo ku saleysan qodobbada, mid waliba wuxuu dooran doonaa waxa isaga u wanaagsan inuu ku quudiyo strawberries inta lagu jiro ubax. Ugu muhiimsan, xusuusnow in bacriminta ee duurka u leeyihiin saameyn weyn ma aha oo kaliya on koritaanka duurka, laakiin sidoo kale on Bisaylkiisa ku haboon ee berry ah.
Ma taqaanaa? Qaadashada strawberries leh asliga ah, waxaad kordhisaa nolosha shelf ee berry ah oo dillaacday.
Daryeelidda ciidda inta lagu guda jiro ubax iyo ka saara baqaha aan loo baahnayn
Marka strawberries Bloom (dhammaadka April - bilawga May), waxay u baahan tahay fiiro dheeraad ah iyo daryeel. Waxay dhiirrigelisaa ubax wanaagsan oo ka soo goynaya haramaha iyo dabcinta ciidda ku wareegsan duurka, kaas oo hagaajiya iswaydaarsiga hawada. Si ay u duurka ubax si ay u helaan xoog ku for fruiting, goynta hore ee whiskers iyo caleemaha strawberries waa in la sameeyo. Caleemaha la qalajiyey si taxadar leh ayaa loo saaraa iyada oo leh xayawaan. Inta lagu jiro ubax, saar shaarib oo dhan iyada oo aan laga reebin, maadaama ay qaadan qoyaan iyo nafaqo ka soo geedka. Marka lagu daro boorashka iyo caleemaha la qalajiyey, ubaxyada ugu horeeya ee strawberry ayaa lagu qaadi karaa. Waxaa la aaminsan yahay in caws ubaxa dambe ee ay ka weyn yihiin kuwa hore, iyo tani waxay saameeysaa size berrida. Kala saarista peduncade looma baahna. Inta lagu jiro ubax ka yar duurka waa in daruuri ku shub caws ama dhadday, sidaas darteed berry ah oo nadiif ah oo aan kala-qudheen ka soo taabtaan ciidda qoyan.
Sidee loo biyo qaboobaa inta lagu jiro ubax
Waraabinta strawberries inta lagu guda jiro ubax door muhiim ah. Iyadoo ay sabab u tahay nidaamka xididka caadiga ah, strawberries awoodin in ay ka helaan qoyaanka ka mid ah caloosha dhulka, annaguna, beeraley, waa in ay ka caawiyaan in this. Si aad u hesho miro ballaaran oo casiir leh, waxaad u baahan tahay inaad waraabiyo dhulka ku wareegsan baadiyaha si ay biyo u helaan xididada. Ku dhaji biyo waraabinta waxay u baahan yihiin bartamaha dahabka.
Labadaba cabbitaanka iyo culeyska biyaha ayaa labaduba saameyn xun ku yeesha miro iyo nidaam xidid. Xaaladda kowaad, xididku wuu qallajiyaa, berry ma shubo, kiis labaad labada xididka iyo berry waxay bilaabaan inay qudhuntaan. Intee in badan ayey ku jirtaa biyaha strawberries inta lagu jiro ubax, waxay ku xiran tahay roobabka. Haddii cimiladu ay roobab tahay oo qoyaanku aad u sarreeyo, biyaha ayaa la joojiyaa. In qalalan hawada kulul, waraabinta badan ayaa la fuliyaa saddex maalmood kasta, si ay duurka u ma kala soocaan iyo berry ku shubtay siman. Waraabinta waxaa la fuliyaa subaxda ama fiidkii, marka qorraxdu aanay karsan, biyaha waa inaysan qaboobin. Biyaha dhirta la waraabiyo waraabka ama hoos baadiyaha. Ka waraabinta kaynta, hubi in xididada aan la soo bandhigin.
Waa muhiim! Ka waraabinta strawberries ubax kaliya ee xididka, biyaha ee kiis kasta oo aan ku dhaco on ubax.
Xeerarka Dhiirigelinta Beerista ee Strawberry
Sababta keentay pollen-strawberry cillad-darrada ah ayaa ku dhuftey midho yar yar. Sababta miro-gurka liita waxay noqon kartaa hoos u dhac aad u daran heerkulka gudaha, soodhada, roobab badan. Si looga fogaado cawaaqibta aan loo baahnayn, waxaad u baahan tahay inaad ku caawiso strawberries leh pollination. Haddii sariirta strawberry ay yaryar tahay, waxaad ku tegi kartaa kiriimka adigoo isticmaalaya buraash yar oo jilicsan on ubax galabtii. In qalalan, cimilada dabaysha on beeraha waaweyn iyo in lagu koriyo oo isticmaalaa fan ah. Pollen oo lagu qabto sariirta hawada ayaa ku faafta sariirta oo dhan.
Haddii aad ka fekereyso haddii aad kartid iyo sida loo hirgeliyo strawberries inta lagu jiro ubax si aad u noqoto pollin, jawaabta ayaa ku yaabi doonta. Qalabka kaliya ee aan waxtarka lahayn ee loo isticmaalo for pollination of strawberries waa malab. Hal qaado oo malab ah ayaa lagu qasi karaa litir biyo diirran oo lagu buufiyo duurka. Honey soo jiidata shinni, iyo pollinators ugu wanaagsan ee strawberries lama helin. Waxaad ku guuleysan kartaa pollination wanaagsan adoo sii kordhaya noocyo kala duwan. Noocyo iskood u goynta ayaa u adeegi doona pollinators for polluted liitay.